Xigmadda Sulaymaan | Farriinta Kitaabka
KU AKHRI Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Danish Digor Douala Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Faroese Finnish Finnish Sign Language French Fulfulde (Cameroon) Georgian German Greek Greek Sign Language Greenlandic Guarani Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Sorani Kwanyama Laotian Latvian Low German Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Manipuri Mapudungun Marathi Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndonga Nepali Ngabere Nias Nicaraguan Sign Language Norwegian Odia Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Romany (Southern Greece) Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Sinhala Slovak Slovenian Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Yehowah Boqor Sulaymaan qalbi caqli iyo waxgarasho leh buu siiyay. Boqornimadii Sulaymaan gudaheed reer binu Israa’iil waxay ku noolaayeen nabad iyo barwaaqo aan meel kale ka jirin
BAL nolosha sidee bay ahaan lahayd haddii ay qaran dhan iyo boqorkeedaba Sayidnimada Yehowah aqbalaan oona sharciyadiisa addeecaan? Afartankii sano ee boqornimada Sulaymaan baa muujisa jawaabta.
Daaʼuud intuunan dhiman wuxuu doortay wiilkiisa Sulaymaan inuu boqor noqdo. Ilaahay baa riyo Sulaymaan ugu sheegay inuu weyddiisto wax u siiyo. Sulaymaan xigmad iyo aqoon buu weyddiistay si uu dadka caddaalad iyo xigmad ugu xukumo. Hadalkaas Yehowah wuu ka farxiyay oo Sulaymaan wuxuu siiyay qalbi caqli iyo waxgarasho leh. Yehowah wuxuu ballanqaaday inuu siin doono hodannimo iyo sharaf iyo cimri dheer haddii uu mar walba addeeco.
Sulaymaan caan buu ku noqday xukunkiisa xigmadda leh. Mar waxaa u yimid laba naagood oo ilmo yar ku murmaya. Middood walba waxay sheegatay inay tahay hooyadii ilmaha. Sulaymaan wuxuu amray in ilmaha laba loo kala gooyo oo naag kasta badh la siiyo. Naagihii mid way yeeshay laakiin hooyadii runta ahayd waxay ku bariday in tii kale ilmaha la siiyo. Sulaymaan si cad buu u arkay inay tan calool jilicsanaatay tahay wiilka hooyadiis oo iyaduu wiilkii siiyay. Waqti gaaban Israaʼiil oo dhan xukunkii Sulaymaan bay maqleen oo dadkii waxay garteen in xigmadda Ilaah isaga ku jirto.
Dhismada macbudka Yehowah waxay ka mid ahayd shuqullada ugu waaweyn ee Sulaymaan sameeyay. Dhismadaas quruxda badan oo Yeruusaalem ku taallay waxay ahayd meesha caabudaadda ee reer binu Israaʼiil oo dhan. Markii macbudka la daahirinayay Sulaymaan wuxuu salaad ku yiri: “Xataa samada iyo samada samooyinku kuma qaadi karaan, haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu kuu qaadi karaa!”—1 Boqorradii 8:27.
Sheekadii Sulaymaan waxay gaartay dalal kale xitaa dalka Shebaa oo ku taal Carabiya. Boqoraddii Shebaa waxay safar u gashay inay soo aragto sharafta iyo maaliyadda Sulaymaan iyo inay imtixaanto xigmaddiisa. Boqoraddii Sulaymaan xigmaddiisa iyo nimcada reer binu Israaʼiil aad bay ula yaabtay. Sidaa darteed waxay ku ammaantay Yehowah inuu carshiga fadhiisiyay boqor xigmad badan. Run ahaan barakada Yehowah awgeed buu Sulaymaan xukunkiisu u noqday ka ugu barwaaqo iyo nabad badan taarikhda reer binu Israaʼiil.
Waa wax laga xumaado in Sulaymaan uu sii wadin ku socodka xigmadda Yehowah. Wuu iska dhegatiray amarrada Ilaahay oo wuxuu guursaday boqolaal naagood oo badnaantooda ilaahyo kale cabuudaan. Naagihiisa tartiib tartiib bay qalbigiisii Yehowah uga jeediyeen oo sanamyo buu caabuday. Yehowah Sulaymaan wuxuu ku yiri in boqortooyada qayb laga xoogi doono. Aabbihiis Daaʼuud awgiis buu qayb yar reerkiis ugu daayay. Yehowah axdigii Boqortooyada uu Daaʼuud la galay ma jebin inkastuu Sulaymaan dhega adkaaday.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay 1 Boqorradii qaybaha 1 ilaa 11; 2 Taariikhdii qaybaha 1 ilaa 9; Sharciga Kunoqoshadiisa 17:17.
Ilaahay sidee buu uga jawaabay codsigii Sulaymaan?
Sulaymaan sidee buu u muujiyay xigmaddiisa?
Sulaymaan sidee buu uga tegay waddadii Yehowah maxaana dhacay?
Wadaag Wadaag Sulaymaan Boqor Xigmad Leh Buu Ahaa